Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: Samy manao ny fahagagana izay vitany | NewsMada
Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: Samy manao ny fahagagana izay vitany
Mitombo ny fahasahiranana, mihena ny fivezivezin’ ny vola ka mihasarotra hatrany ny vintana hifanenana aminy. Samy miresaka ny fahorian’ny ankamaroan’ny mponina nefa vitsy angamba ny manontany tena momba ny fomba ahafahan’ny olona sahirana hahita hanin-kohanina isan’andro. Maro ny olona eo am-
pifohazana maraina no tsy manana tahiry iatrehana ny sakafo ho an’ny ankohonany eo amin’ity andro vao miposaka mandra-pahatongan’ny alina. Misy aza no tsy mahafantatra akory na ny toerana na ny fomba hahafahany mitsikaraka izany. Sady olona amin’ny maha olona ny tenany moa no tompon’adidy koa noho ny maha raiamandreny matetika, ka na ho any na tsia, na be fanantenana na kely finoana dia tsy maintsy miarina avy ao am-pandriana. Raha tena ho lazaina ny marina dia any amin’ireo fianakavina tena sahirana dia ny reny no mazàna mahatsiaro ny tenany ho tompon’andraikitra amin’ny fikarohana sakafo ho an’ny ankizy. Fahagagana miverina isan’andro no tsy maintsy ataony noho izany. Ary i Ramose hoy ny fanontaniana ? Ramose koa anie manana ny fahagagana tsy maintsy sahaniny, amin’izao fotoana feno hasarotana, noho ny fikaton’ny orin’asa sasantsasany, ny fihenan’ny asa an-tsirika, ny fandrarana etsy sy eroa. Tsy mora no mitady vola, ka tampotampoka no ahafahana mifoka sigara, ary ho an’ny sasantsasany fahagagana no tsy maintsy efaina mba ahafahana nanamando kely amin’ny konsoma ny tenda sady maina no tsy misy an’ilay mahery famonoana mikraoba.
Arak’izany, tsapa fa ao anatin’ny fahasahiranana manana ny maha olona azy ny vehivavy. Nefa ankilan’ izay arakaraky ny fihenan’ny fahasahiranana mangidy ka misondrotra amin’ny ambaratonga ahitana masoandro miiratra kokoa na fahafahana misitraka ny mamy amin’ny fampiadanan-tena, toa mihemotra hatrany ny anjara-toeran’ny vehivavy. Izany aloha ny hafatra na­tsipin’ny fikambananam-behivavy tamin’ny fankalazana ny Andro ho an’ny vehivavy afrikana. Tsy manda izany ny ankamaroan’ny lehilahy. Samy mihevitra avokoa izy ireo fa tsy miankina amin’ny rariny izany trangan-javatra izany, nefa tsy misy firy no vonona hikisaka kely eo amin’ny andavanandro hahafahan’ny vehivavy hisisika haka ny toerana mendrika azy. Fantatry ny maro amin’ny vehivavy fa raha ny lehilahy no andrasany dia tavela eo izy sy ny lambany. Ny ezaka samy irery ihany no ahafahany misondrotra. Matetika anefa rehefa ao anatin’ny sehatry ny asa ny fifanina­nana, lasa firafesana, tsy hoe sanatria fifangalaram-bady fa fifankahalana no miseho, ary vao mainka moa tazana izany amin’ny toerana fisehoana toy ny eo amin’ ny andraikitra iombonana fiadidiana serasera. Tsy atao mahakivy izany, maro ireo tovovavy mitombo fahaizana hatrany, ka tsy ho ela dia hadio ny sehatra fifaninanana, ny fahaizana sy ny toe-tsaina ary ny toetra no hany fitaovam-piadiana hany hananam-bidy sy handaitra.